Saynisyahan ka Tirsan Dowladda Maraykanka oo ka hadlay Filim la soo Habeeyey loona Adeegsaday Olalaha Doorashadda ee Trump | Allbalcad Online
Home WARARKA Saynisyahan ka Tirsan Dowladda Maraykanka oo ka hadlay Filim la soo Habeeyey...
Saynisyahan ka Tirsan Dowladda Maraykanka oo ka hadlay Filim la soo Habeeyey loona Adeegsaday Olalaha Doorashadda ee Trump
Saynisyahan Sare oo ka tirsan Dawlada Maraykanka Anthony Fauci ayaa sheegay in filim la soo habeeyay oo loo Adeegsaday Xayeysiintii Ololaha Madaxweynaha Maraykanka Trump uu marin habaabin yahay.
Waxay muujineysaa Dr Fauci oo leh “ma qiyaasi karo in qofna uusan wax badan qaban karin” si uu ula dagaallamoCudurka Safmarka ee Coronaviruska , isagoo soo jeedinaya inuu ka hadlayo madaxweyne Trump.
Si kastaba ha noqotee, Dr Fauci wuxuu ka hadlayey naftiisa iyo Saraakiisha kale ee Caafimaadka.
Khabiirka cudurada faafa ayaa hore isaga iyo Mr Trump isku khilaafeen sida loo maareeyo Cudurka Safmarka ee Coronaviruska.
“Ku dhowaad soddonkii sano ee aan u shaqeynayay bulshada, weligey si cad uma taageerin musharax siyaasadeed,” ayuu yiri, qoraal uu u diray wakaaladda wararka ee AFP.
Faallooyinka la ii sifeeyay aniga oo aan ogolaansho ka helin xayeysiinta GOP-ka waxaa laga saaray macnaha guud ee aan ka sheegay bilo ka hor oo ku saabsan dadaalka saraakiisha caafimaadka bulshada ee dowladda dhexe, ”ayuu Dr Fauci ku daray.
Xayeysiinta 30-ka ilbidhiqsi waxay cadeyneysaa “Madaxweyne Trump wuu ka soo kabanayaa coronavirus, sidoo kale Ameerika sidoo kale”, ka hor inta uusan ciyaarin filimka Dr Fauci
Si kastaba ha noqotee, muuqaalkii asalka ahaa ee Dr Fauci, oo ka soo baxay wareysi uu khabiir ku takhasusay epidemiologist uu ku siiyay Fox News bishii Maarso, ayaa waxa uu sheegay “Waxaan ku mashquulsanaa waqti buuxa oo arrintan ah. Waxaan joogaa Aqalka Cad maalin kasta waa hawl maalin kasta. Markaa, ma qiyaasi karo in xaalad kasta oo jirta in qofna uu wax badan qaban karo.
Afhayeenka ololaha Madaxweynaha Maraykanka Trump, Tim Murtaugh oo ka jawaabaya ayaa yiri: “Kuwani waa ereyada Dr Fauci. Muuqaalka waxaa laga soo duubay wareysi telefishanka laga sii daayay oo Dr Fauci uu ku amaanayay shaqada maamulka Trump. Erayada lagu hadlay waa sax, toosna waxaa uga soo yeeray Dr. Af Fauci.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale difaacay adeegsiga agabkan, isaga oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay: “Runtii waa ereyo u gaar ah Dr Fauci. Waxaan qabanay shaqo ‘caadi ah’, sida ay sheegeen qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha gobolada.”
Tani waxay timid maalmo kadib markii Dr Fauci uu ku dhaleeceeyay Aqalka Cad marti galinta kulan bishii la soo dhaafay lala xiriiriyay inuu ka dillaacay Coronaviruska.
Wuxuu sheegay in dhacdadii Rose Garden ee dhacday 26-kii Sebtember, ee loo qabtay in lagu soo bandhigo magacaabista Madaxweyne Trump ee Maxkamadda Sare, ay ahayd “dhacdo aad loo buunbuuniyo”. Ugu yaraan 11 qof oo ka qeybgalay markii dambe ayaa laga helay fayraska.
Mr Trump ayaa sidoo kale laga helay cudurka 1 dii Oktoobar, waxaana la dhigay isbitaal muddo seddex maalmood ah fayraska.
Previous articleWeerar khasaare dhaliyay oo ka dhacay Galgaduud
Next articleMarkabkii Turkiga ee Ku Sugnaa Bartamaha Giriiga oo ku soo laabtay Badda Mediterraneanka